Tao Brazilià, Indiana An’aliny Avy Ao Brezila ”Namindra” Hanohitra ny Governemanta Temer · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra 350.org Nandika (es) i Paulina Grasso, Annick Battesti, imanoela fifaliana
Voadika ny 11 Jolay 2018 16:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Ελληνικά, Français, नेपाली, English
Ny 23 hatramin'ny 27 aprily 2018, indiana mpitarika mihoatra ny telo arivo avy amin'ny faritra rehetra ao Brezila no nifamory tao an-drenivohitra. Sary: 350.org, CC BY-NC-SA 2.0.
Ity lahatsoratra nosoratan'i Nathália Clark ho an'ny 350.org [fr] ity (fikambanana izay ny tanjona dia ny hamorona ”hetsika malaza erantany ho an'ny toetrandro”), dia naverina navoaka eto ao anatin'ny sehatry ny fiarahamiasa amin'ny Global Voices. Nandray anjara tamin'ny Hetsika Famoriana indizeny nasionaly tao Brezila ny 350.org.
Mamofona setroka sy roucou [fr] ilay toby, zavamaniry fampiasa ho an'ny sary hosodoko amin'ny vatana. Hery manohitra no mivoaka avy ao amin'ny vahoaka. Afaka heno ireo hiram-pivavahana, fombafomba mantra sy ireo ranomasom-pivavahana.
Feona indiana mihoatra ny 3 000 avy amina fiarahamonina anjatony samihafa avy ao Brezila iray manontolo no manakoako ao amin'ilay toerana, olona tonga hanatrika ny andiany 2018 amin'ilay Hetsika Famoriana indizeny nasionaly, izay niseho ny 23 sy 27 aprily tao Brazilià, renivohitry ny firenena.
Isantaona ilay hetsika, antsoina ihany koa hoe ”Toby Tany Afaka”, no karakarain'ny Fitambaran'ny mponina indizeny ao Brezila ‘APIB). Tamin'ity taona ity no andiany fahadimy ambin'ny folo.
Ny fanisambahoaka tao Brezila farany dia manome isanà vondrom-piarahamonina indizeny 305 ao amin'ny firenena izay manana fiteny samihafa miisa 274. Miisa olona 897 000 izy ireo mitambatra, izay eo amin'ny 0,47%-n'ny mponina rehetra ao amin'ny firenena, tombanana eo amin'ny olona 200 tapitrisa eo.
Ny ankamaroan'ireo indizeny dia miparitaka any amina vohitra an'arivony maro any avaratra ka hatrany atsimon'ny tanin'ny firenena, mitoetra eo amin'ireo Tany Indizeny miisa 715 izay ankehitriny dia navadika hanarana ny ara-dalàna sy ankatoavin'ny Fanjakana federaly. Fa taratasin-tany indizeny mihoatra ny 800 no mbola miandry ny fampanarahan-dalàna azy ireo.
Ny ”didim-panjakàn'ny fandripahana olona” sy ireo famitahana maro hafa
Niharan'ny andiana faharesena ara-politika izay nitondra tosika vaovao ho azy ilay hetsika, nialohan'ilay hetsika famoriana tamin'ity taona ity.
Ny Kaongresy nasionaly Breziliana, izay anjakan'ny maro an'isa izay manohana amin'izao fotoana izao ny tsindry ara-bola ataon'ny indostria momba ny sakafo, dia te-hanaiky karazana ”fonosana ara-pifidianana” izay manaisotra amin'ireo mponina indizeny ny zony araka ny Lalàm-panorenana tamin'ny 1988 sy ny lalàna iraisam-pirenena, toy ny Fifanarahana 169 an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Asa [fr].
Manoloana ny fahasarotan'ny zava-misy ara-politika ankehitriny ao Brezila, ao anatin'ny tontolon'ny fitondrana miteraka adihevitra an'i Michel Temer, mbola nahazo vahana indray ireo mpisolotena avy ao amin'ny sehatra famokarana vokatry ny tany. Nahavita maka tombony ary niakatra zanatohatra vaovao teo anivon'ny fanjakana izy ireo.
Fotoana vitsy talohan'ny nanaovana ilay Toby Tany Afaka, nilefitra tamin'ny tsindry nataon'ny vondron'ireo mpandàla ny ambanivohitra ny filoha ary nanosika ny fialàn'ny filohan'ny Fikambanana nasionalin'ny Indiana (FUNAI) [fr], izay haingana dia nosoloina olona akaiky kokoa ny sehatry ny fambolena.
Ny fisalasalan'ny fanjakana tamin'ny fanomezana fankasitrahana ofisialy ireo sisintany indizeny ary ireo fanenjehana teny anivon'ny fitsarana natao tamin'ireo mpitarika ny hetsika no lohahevitra manahirana sy fitarainana manandanja indrindra tamin'ity fihaonana tao Brezila ity.
Mizara ny fandrahonana azony i Kretã Kaingang, indizeny mpitarika avy ao Paraná ary mpandrindra ny fandaharanasa indizeny ao amin'ny 350.org ao Brezila : ”Notazonina nandritra ny fotoana maro aho ary, nampangaina ho nanao fandikandalàna maro izay tsy voamarina ary nandrara ahy tsy hanatona ny tany nahaterahako ny mpitsara iray. Nandritra ny efatra taona, tsy afaka nankany amin'ny toerana ilevenan'ny tavoniko aho”, hoy izy.
Tamin'ny septambra 2017, namoaka didim-pitondràna ny lehiben'ny fampanoavana, izay mametraka fa ny indizeny nipetraka tamin'ny taniny tamin'ny fotoana nanambarana ny Lalàm-panorenana tamin'ny 1988 irery ihany no hahazo ny fanekena ny zony amin'ny taniny.
Fantatra amin'ny anarana hoe ”ny foto-kevitry ny tokonam-potoana” ary indraindray ihany koa ”ilay didim-pitondran'ny fandripahana” ity didim-pitondràna ity, ary nahazo ny fankatoavan‘ny filoha Michel Temer. Raha ho lasa lalàna izany, dia hampihena be mihitsy ny mety hahazoana ny fankatoavana ireo tany indizeny vaovao.
”Iray ihany no tanjonay : hampandeha tsara ny dingana famaritana ireo taninay”
Nirotsaka tamin'ireo indizeny mpitarika niambina teo alohan'ny tranoben'ny fanjakana federaly ny alina. Avy hatrany dia nandrehitra labozia ny vahoaka ary nampiato izay nataony mba hihaino ny fitarainan'ny iray tamin'ireo vehivavy indizeny. Ho mariky ny fisaonana.
Ny ampitso, ny tokotaniben'ireo ministera, ny lalàmbe ivondronan'ireo tranobe rehetra an'ny fanjakana, dia feno mpanao fihetsiketsehana indray izay mihazo ny lalàna mankany amin'ny Kaongresy Nasionaly.
Tanaty loko sy ravaka marevaka, mandihy sy mihira ny hiakan'adin-dry zareo, ireo indizeny avy amin'ny fiarahamonina kaingang, guaraní, guaraní-kaiowá, guaraní-mbya, xucuru, pataxó, munduruku, awá-auajá, guajajara, marubo, xerente, xavante, kayapó, tenetehara, tembé, tucano, krahô, kanela ary maro hafa koa dia manao diabe fangatahana ny famitàna ny dingana famaritana ireo taniny ary mba hangatahana ny fanajana ireo zony ihany koa, iantohan'ny Lalàm-panorenana tamin'ny 1988.
Mitondra sorabaventy natokana ho an'ireo manampahefana ireo indizeny mpitarika : ”Famaritana, izao dieny izao !, ”Tsia amin'ny fitrandrahana solika eo amin'ny taninay!” ary ny hoe ”Manohitra ireo Guaranis”. Milaza ny fandravàna ireo tany, fanimbàna ny renirano sy ireo harena voajanahary noho ny halehiben'ireo tetikasa fanorenana fotodrafitrasa sy angovo.
”Iray ihany no tanjonay : hampandeha tsara ny dingana famaritana ireo taninay. Maro tamin'ireo fianakavianay no tsy afaka tonga manatrika, izay no mahatonga anay tonga eto misolo tena ny vondrom-piarahamoninay”, hoy i Kretã Kaingang.
Nandritra ilay fihetsiketsehana, nolokoina mena ny lalana, mba ho marika hanehoana ny ràn'ny mponina indizeny latsaka nandritra ny hetsi-pamoretana sy herisetra izay heverin'ny maro ho toy ny tohin'ilay fandripahana ara-tantara natao tamin'izy ireo nandritra ny fanjanahantany.
”Ny dian-drà’ avelanay dia maneho ny herisetra sy ireo fanafihana nataon'ny Fanjakana tamin'ny vahoaka teratanin'ity firenena ity. Fanafihana, fandrahonana ary famonoana maro samihafa no nitranga teto Brezila, raha tsy horesahana ny mikasika ilay dingana fiampangàna heloka bevava natao ireo mpitarika anay. Kanefa, na eo aza ity toe-javatra manahirana ity, hanohy ny hanohitra sy ny hiady toy ny nampianarin'ireo razambenay mpiady izahay”, hoy i Marcos Xukuru, mptarika avy any Pernambouc.
Joênia Wapichana, ilay vehivavy indizeny voalohany mpisolovava nitaky ny Fitsarana Avo, dia mamintina ireo fanamby: ”mampidi-doza ny fitohizam-piainan'ny mponina indizeny ny hoe mitetika ny hampiasa ny fitaovana araka ny lalàna mba haneriterena ny zo amin'ny famaritana, izay ny fivelomana dia miankina tanteraka amin'ny tany sy ny zavatra omeny azy ireo”.
“Midika fitahirizana ny famaritana ireo taninay. Naharay fitarainana mitovy mikasika firohotan'ireo mpanapaka hazo, mpizaha, mpaka tany sy orinasam-panjakana avy amin'ny havanay any amin'ny faritra rehetra izahay. Ny tanjonay, dia ny hiantohana ny fomba fiainanay ho any amin'ireo taranaka ho avy. Sady miady ho anay izahay, mponina indizeny, no ho an'ny fiarahamonina Breziliana iray manontolo”, hoy i Tupã Guarani Mbya, avy amin'ny tany indizeny ao Tenondé Porã, any São Paulo.
Ho an'ilay mpitarika, Juárez Munduruku, toy ny hazo ireo mponina indizeny. ”Aina mitovy no mikoriana ao aminay sy ny hazo. Raha vonoina izy ireo, dia maty ary tsy miverina intsony. Rehefa mamono ‘filoham-poko’ iray ny mpikapa hazo iray, dia mifarana ny tantara.”
Manampy izy fa ao Rio Tapajós ao Amazonia, izay misy ny taniny, dia efa kasaina ho asiana toby lehibe 43 fakana herinaratra ahodin-drano izay hisakana ny fikorinan'ny iray amin'ireo ony lehibe indrindra ao amin'ny firenena, toerana iray masina ho an'ny mponina ao aminy. Roa amin'ireo tetikasa ireo no efa eo am-panatanterahana izay, misy ihany koa, tetikasa fametrahana seranantsambo 30 mba hitaterana soja avy amin'ny voly tokana amin'ny tany iray, fa ihany koa, akora mineraly sy hazo avy amin'ny fanapahana tsy ara-dalàna.
Nandika (es) i Paulina Grasso